Uzosungula iqembu elisha? | IOL Isolezwe
Uzosungula iqembu elisha?
Isolezwe / 31 January 2013, 10:40am / INTATHELI YESOLEZWE
uSolwazi Mamphela Ramphele kuthiwa angawathwalisa kanzima amanye amaqembu ezombusazwe njengoba kusolakala ukuthi usezinhlelweni zokusungula iqembu lakhe lezepolitiki.
ONGOMUNYE wabesifazane abathathwa ngokuthi bangomazulazayithole eNingizimu Afrika, uSolwazi Mamphela Ramphele, kubonakala esekulungele ukuphosela inselelo i-ANC kwezombusazwe kuleli.
Muva nje kube khona imvunge emuva kokuqubuka kwezindaba zokuthi uRamphele oyisifundiswa esasiyisishoshovu senhlangano eyayiphakamisa isithunzi somuntu omnyama, i-Black Consciousness, sicela abatshalizimali ukuba basisize sisungule iqembu elisha lezombusazwe.
USolwazi Ramphele (65) akayena umafikizolo kwezokuphatha izinhlaka ezisemqoka emhlabeni. Uke waba ngomunye wabaphathi bebhange lomhlaba i-World Bank.
Umhlaziyi wezepolitiki ozinze eNyuvesi yaseGoli, uSolwazi Adam Habib, uchaze uRamphele njengowesifazane ophumelele kakhulu kuleli selokhu kwangena umbuso wentando yabantu.
Indlela eya empumelelweni kaRamphele ayikaze ibe lula kwazise wabhekana nezinto eziningi ngemuva kokusungula umbutho i-Black Consciousness ngokuhlanganyela noMnuz Steve Biko owafela ezandleni zamaphoyisa obandlululo ngo-1977.
Ngemuva kokuboshwa wabe esedingiswa nguhulumeni wamabhunu waze wayozinza endaweni yasemakhaya enyakatho yakuleli.
Ngaphandle kokuba wudokotela uSolwazi Ramphele ungusomabhizinisi ophumelelayo oneziqu zezohwebo nezobudokotela ezifundweni ezibizwa ngokuthi yi-Social Anthropology.
Ngaphezu kwakho konke lokhu waqopha umlando ngokuba ngowesifazane wokuqala omnyama ukuphatha inyuvesi kuleli.
Akhala ngakho kakhulu wukuthi uKhongolose wehlulekile ukuguqula impilo yabampofu. Amahlebezi aqubuke emaphephandabeni akamuva athi uRamphele usemkhankasweni wokuqoqa imali e-USA ukuze asungule iqembu lezombusazwe “elizotakula leli lizwe.”
NgoLwesibili akaze aphike ukuthi lokhu kuyiqiniso futhi ugcizelelile ukuthi akayena umuntu olala endleleni ngakho uma sekufanele uzosho ukuthi uhlelani ngekusasa lakhe.
Umhlaziyi wezombusazwe waseNyuvesi yase-Wits, uNksz Susan Boyle, uthe izinkulumo ezintsha zikaSolwazi Ramphele noma lokhu akubhalayo kunika umqondo wokuthi kukhona izinhlelo zeqembu lezombusazwe ahlela ukulijoyina noma ukubeka ikusasa lakhe kulo. UNksz Booysen uthe uma egcina engenile kwezombusazwe kuyosho ukuthi kuyobe sekunenye inkunzi esibayeni sezombusazwe.
UHabib yena uthe uma egcina esungule iqembu lezombusazwe kumele ukuthi libe nesizinda sabalandeli nezindlela eziphusile zokuqoqa abalandeli ngale kwalokho luselude uhambo okusafabele luhanjwe.